Olee otú Hackers mbanye anataghị ikike & Nbsp; Nchegbu ndị ọkachamara na mberede
N'ihe ọ bụla metụtara ntanetị metụtara ihe nkesa, ọ na-abụkarị ihe ize ndụ nke hacking. NaIntanet gụnyere onye ọrụ na-eziga ma na-anata ozi na ihe nkesa. N'ihi ya, ọtụtụ n'ime mmemme weebụ na-elekwasị anya na onye ọrụ naọ bụghị nkwụsi ike nke usoro ahụ. N'ihi nke a, ndị mmadụ na-emepụta ebe nrụọrụ weebụ e-commerce bụ nke nwere ike ịrụ ọrụ ndị a naanị n'ụzọ nṅomi,eleghara eziokwu ahụ anya na ndị nwere nsogbu na-ezighị ezi nwekwara ike iji ohere a. N'ihi ya, nchekwa nke ebe nrụọrụ weebụ gị na nke nkendị ahịa gị na-adabere n'otú ị ga-esi merie mgbalị mbanye anataghị ikike.
E nwere ọtụtụ ụzọ ndị mmadụ si eji ha eme ihe - pure vapor usa. Ihe mgbaru ọsọ Hackers bụchọta nbanye online na-enweghị ikike ma nweta ohere ịnweta ozi nke na-anọ na nchekwa data nkesa. N'ọnọdụ ụfọdụ, ha nwere ike ịnwaleweta mkpokọta weebụ site na iji botnets ma ọ bụ obi ọjọọ ọzọ. Ọtụtụ ndị na-eme ka ebe nrụọrụ weebụ dị ka blọọgụ ma ọ bụ ụlọ ahịa e-commerce na-echeotú hackers igosi ha hacks. Maka otu ịmepụta ụzọ na usoro nke igbochi ndị na-agba ọsọ, ọ dị mkpa ịghọta otú ndị na-agba ọsọmbanye anataghị ikike na ebe nrụọrụ weebụ.
Jack Miller, Onye Nlekọta Ọrụ Ndị Ahịa nke Ọcha ,akọwapụtara ụfọdụ ụzọ, nke hackers eji, dị ka n'okpuru:
Mwakpo Cross Site (XSS)
Ndị a bụ koodu ndị a na-eme ntanetị ọrụ nke nwere ike ịgba ọsọ na ihe nkesa ma wakpo onye nwere ikekọmputa..Onye nlekota oru na-amalite site n'ịghọgbu onye ọrụ n'ime ịpị njikọ nke na-emerụ ahụ. Njikọ a na-agbazi edemede na ihe nchọgharị, ebehacker na-enweta ọwa nke iji ọrụ ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, onye hacker nwere ike iji ihe nchọgharị data niile dị ka okwuntughe na cache. The hackernwekwara ike iji ihe nchọgharị dị ka igwe okwu yana kamera na-enweghị nkwenye nke onye ahụ.
SQL ogwu ogbugba
Nke a na-eji ọnọdụ nke ụfọdụ asụsụ mmemme eme ihe. Nke aeji arụ ọrụ na-arụ ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ nke nwere usoro iwu dara ogbenye. Dịka ọmụmaatụ, ebe nrụọrụ PHP nwere ike ịdọrọ onwe gị na mbuso agha SQL.Onye nlekota ihe na-agba mbọ ịnweta nchekwa data weebụ ma nweta niile data. Ozi dịka data ụlọ ọrụ, ndebanye ọrụ, na akwụmụgwọozi kaadị na-aghọ onye na-adịghị ike n'ụzọ dị otú a. Ọzọkwa, onye na-awakpo ahụ nwekwara ike ibudata, bulite ma ọ bụ dezie ogige na ogidi na ahịrịnke data ị na-eji. N'ọnọdụ ndị ọzọ, ndị na-agba ọsọ nwere ike iji nhazi ederede, ebe ha na-ezu ohi data dịka ọ na-agafe n'etiti ihe nkesana onye ọrụ.
Mgbe anyị na-eme weebụsaịtị, anyị na-aghọtaghị ihe ndị nwere ike ịnwụtinye n'ọrụ azụmahịa anyị. N'ihi ya, a na-ewukwasị ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ iji jee ozi onye ahịa na-enweghị onye hacker n'uche. Ndị ome ike nwere ike imeọtụtụ usoro na weebụsaịtị, ọtụtụ n'ime ha nwere ike ịgụnye izu ohi, aghụghọ ma ọ bụ na-ezighị ezi nke ozi nzuzo. Na nkenke, nchekwa gịsaịtị, nakwa nke ndị ahịa gị, na-adabere na gị, onye nwe ya na nke ha. Imirikiti Nchọpụta Ngini Nchọpụta Mmasị (SEO) na-agbalị ịba ụbanjirimara nke ebe nrụọrụ weebụ yana visibiliti SERP. Ndị na-eme ihe ike nwere ike iweta saịtị na nke a. Ihe ọmụma banyere ụzọ nke hackingnwere ike ịchekwa nnukwu ọrụ ụlọ ọrụ yana ịnweta ikike ngalaba na-enyocha engines maka nchekwa.